C/raxmaan C/shakuur oo laga sugayo Maxkamadda Racfaanka | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta C/raxmaan C/shakuur oo laga sugayo Maxkamadda Racfaanka
C/raxmaan C/shakuur oo laga sugayo Maxkamadda Racfaanka
Waxaa maanta oo Arbaco ah xarunta Maxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir laga sugayaa siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame, kadib markii Maxkamadda Racfaanka qoraal ay horey u soo saartay ku sheegtay in 03-da January 2018 oo maanta ku beegan Maxkamadda laga sugayao Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur.
Qoraalka Maxkamadda ay soo saartay waxaa sidoo kale ku qornaa in ay ku wargelisay Taliyeyaasha qeybta Booliska ee Gobolka Banaadir iyo Taliyaha Booliska degmada Wadajir inay gaarsiiyaan mudada loo qabtay dhageysiga dacwadiisa, si uu uga soo qeyb galo.
Xafiiska Xeer ilaalinta Guud ee Qaranka ayaa sidoo kale ka qeyb galaya dhageysiga iyo Dooda Dacwadda, waxaana dhammaan dhinacyada lagu wargeliyay in ay waqtiga ilaaliyaan.
Guddoomiyaha Maxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir Saalax Sheekh Ibraahim Dhiblawe oo 26-kii December soo saaray warqad qoraal ayaa wuxuu ku sheegay in uu dib u furay kiiska C/raxmaan C/shakuur oo Maxkamadda looga yeeray 27-kii December, balse Maxkamadda uusan hor imaan, taasina ay qasabtay in markale waqti loo qabto.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa soo saaray shalay warsaxaafadeed uu ku sheegay in aysan jirin cid dacwad sharci ah ku haysata, waxaana uu ku eedeeyay Xeer Ilaaliyaha Qaranka in uu ku soo oogayo dacwad siyaasadeysan.